Malunga Nathi - IPHONDO SICHUAN HUIQUAN CANNED FOOD CO., LTD
Inkampani yethu yenye yezona zinto ziphambili zokutya okunkonkxiweyo eziveliswa kumzantsi-ntshona weTshayina ngamava obuchule. Inkampani yethu yasekwa kwi-2003.Ikhowudi yethu yefektri yokuthumela ngaphandle yi-T-11 yokuvelisa ukutya okusemathinini kwaye sinokuBhaliswa koGutyulo kunye ne-HACCP, iSatifikethi se-ISO.
Inkampani yethu ikwi-Xinjin County, kwisiXeko saseChengdu ecaleni kwe-308 yeNdlela yeSizwe, egubungela ummandla ongama-24,306 square metres. Sineemeko ezincomekayo zemveliso yogutyulo kunye nendawo ezisingqongileyo.
Iimveliso zethu zineentlobo ezingaphezu kwama-20 ezahlukeneyo, ezifana nenyama yesidlo sasemini, inyama yehagu eyotyiweyo, inyama edayiweyo, amakhowa, idada eligcadiweyo, njl.njl. Izinto ezikrwada zenyama ziphuma ikakhulu kwimizi-mveliso yenyama ebhaliswe kwi-State Commodity Inspection Bureau kwaye yafumana isatifikethi seHACCP.
Iimveliso zethu zithengiswa ekhaya nakwamanye amazwe. Uninzi lwabathengi bathanda iimveliso zethu. Sithemba ngokunyanisekileyo ukusebenzisana nawe ukudala ikamva eliqaqambileyo.
IMBALI ENKULU NGOKUTYA OKUSEKONKANI
Ngo-1810, usomashishini uPeter Durand wenza i-UK yafumana ilungelo elilodwa lomenzi weetoti ezigqunywe ngetin, ezaziwa ngokuba zii-“tinplate” iinkonkxa. ukutya okunkonkxiweyo konakaliswa, ilahleko yezondlo.Ukutya okunkonkxiweyo kwakhawuleza kwaba yeyona nto ibalulekileyo yasemkhosini kwaye yaba lukhetho lokuqala lwenyama kunye nentlanzi eyongezelelweyo kwiindawo ezisemagqagaleni, zisiba zithandwa ngakumbi kwihlabathi liphela.
UMBONISI OMNIKELWE EMKHOSI
Ukutya okusemathinini luhlobo lokutya komkhosi.Idlala indima ebalulekileyo kwintsimi yokutya komkhosi ngenxa yokuba inokugcinwa ixesha elide kwiqondo lokushisa eliqhelekileyo kwaye inamandla amakhulu okumelana neemeko zangaphandle ezingathandekiyo.Sisixhobo esiyimfuneko kumajoni. ukuqhubeka nokulwa okanye ukwenza imisebenzi ebaleni.Kwaye sibonelela umkhosi ngamawaka alishumi eetoni zenyama enkonkxiweyo minyaka le, singababoneleli abachongiweyo bomkhosi wethu.
Idosi yokutya enkonkxiweyo ayiqulathanga izithinteli ezininzi njengoko abantu abaninzi becinga, enyanisweni ukutya okunkonkxiweyo ngokuqhelekileyo idosi ayinazo izithinteli, Umgaqo wokugcinwa kokutya okunkonkxiweyo kukubulala iintsholongwane ngokufudumeza kunye nokuthintela iibhaktheriya ekungeneni ekutyeni ngokuvala umoya. igqiba ekubeni akufuneki ukuba yongeze naziphi na izigcina-mafu.
Intsapho yethu ibisoloko ikuxabisa ukuhlala kunye ukuze sifumane isidlo, kodwa siyazi ukuba ukuxakeka kunokwenza oku kube lucelomngeni. I-Keystone izisa ukulungeleka kwenyama ephekwe ngokupheleleyo kwiiresiphi zakho zosapho ozithandayo, ukunciphisa ixesha lokulungiselela ngelixa ubonelela ngencasa emnandi. Ngoko unako ukubuyisela usapho lwakho etafileni ukuze ufumane ukutya okusempilweni nokufanelekileyo okuphekwe ekhaya.
SIKHETHE KUKUBA UKHETHE UQINISEKILEYO.
Sijonge Phambili ukusebenzisana ne-Partnera kwiHlabathi liphela kwaye Nokwakha Ikamva Eliqaqambileyo.
Ulawulo olungqongqo loMgangatho, uvelisa iNtengiso eNgqongileyo, akukho Mda weNzuzo kaMiddleman, kunye namava eMveliso yeminyaka engamashumi amabini, besibonelela ngeeMveliso eziMgangatho kunye neeNkonzo zobuNgcali kubathengi kwiNqila ezingaphaya kwamashumi amabini anesihlanu kunye neeNgingqi.
Iimveliso ezininzi ezitsha ziye zaphuhliswa kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, kwaye akukhange kubekho sikhalazo kwaye akukho ziNgozi ziPhezulu zoMgangatho kwithuba elide.Sinokwenza eyakho incasa kunye nencasa kubo bonke abathengi bethu.
Akukho Moq kwiiMveliso ezininzi kwaye zonke iimveliso zinokuhanjiswa ngokukhawuleza njengoko sinako.Sihlala sinyanisekile kubo bonke abathengi kwaye asiyi kutshintsha isivumelwano sethu ngokulula.Siya kuthatha uxanduva olupheleleyo kuyo nayiphi na ingxaki yoMgangatho.
I-Canning Beef Brisket, Iinyama ezinkonkxiweyo zokusinda, Inyama yehagu yesidlo sasemini, Inkukhu enkonkxiweyo, Inyama yehagu enkonkxiweyo, Idada Eliqhotsiweyo elinkonkxiweyo,